ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL I-Rafa Silva Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biografics yeNobold
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football genius ngegama lesidlaliso AmaPhuthukezi Ingozi yeEdeni". Ibali lethu leRafa Silva yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawuleyo ukusuka ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokunyuka kukaRafa Silva. IiCredits zemifanekiso: Omirante kunye I-Maisfutebol.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nokulawulwa kwakhe kwebhola egcobisayo, isantya sakhe sokumangalisa kunye nodidi olugqwesileyo lokudlula. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga uRafa Silva's Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
URafael Alexandre "Rafa" Fernandes Ferreira da Silva Wazalwa ngomhla we-17th kaMeyi 1993 eForte da Casa ePortugal. Wazalelwa kumama ogama lakhe lingavumiyo ukukhangela iinjinjini zokukhangela ngonaphakade, nakuyise-uJoao Silva.
Ngabazali bakaRafa Silva. Ityala lemifanekiso: I-ZeroZero.
Isizwe samaPhuthukezi sobuzwe obuMhlophe sineengcambu ezincinci ezaziwayo sakhuliselwa kwidolophu yakhe - iForte da Casa, apho i-pastard ezaliswe ngumgcini kuthiwa yenziwa. Nangona kunjalo, uSilva omncinci wakhula njengomntwana onolusu onesifo esibuthathaka esicinga ukuba samgcina ekudlaleni ibhola kunye nokuthatha inxaxheba kuwo nawuphi na omnye umdlalo de abe mdala kwi-10.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Kwakwisikolo sezemidlalo iUnião Atlético Povoense - iikhilomitha ze3 ukusuka eForte da Casa- ukuba uSilva uthathe amanyathelo akhe ebhola ekhatywayo, umsebenzi awawudibanisa nezinto azifundisayo kwisikolo samabanga aphakamileyo eSanta Maria da Feira.
Ngelixa wayedlalela i-Povoense, i-10-11-ngelo xesha yayisoyika kwaye ihlonitshwa ngabakhuseli ngamanye amaqela angazange akholelwe ukuba angaboyisa ngesantya, xa bedubula kunye nemibane.
Uqeqesho lolutsha eUnião Atlético Povoense apho uRafa Silva wathabatha amanyathelo akhe ebhola ekhatywayo. Ityala lemifanekiso: Uapovoense.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Iinkcukacha zobomi bokuqala
Emva kokuba echithe unyaka wonke efunda iziseko zebhola kunye nokugqwesa kwisikolo sezemidlalo iUnião Atlético Povoense, uSilva waya eFutebol Clube de Alverca apho wayeneminyaka emininzi yobomi bakhe.
Midway ngohambo lwakhe lweminyaka ye-7 kwi-Club, uSilva wafumana isisindo esithobekileyo esinqanda abaphikisi bakhe ekubeni bangacingi kangako ngaye. Nangona kunjalo, ukuphawula kwabo okuValiweyo kwakungafaniyo namandla akhe ahlaselayo.
Ifoto yobuntwana bakaRafa Silva eForeebol Clube de Alverca. Ityala lemifanekiso: Omirante.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Iindaba zokuBamba igama
U-Silva oneminyaka eyi-18 u-Silva uqhubeke watyikitya kunye ne-CD Feirense eyacothisa ukunyuswa kwakhe ngonyaka njengoko wayesenziwa ukuba adlale kwinkqubo yolutsha yeqela lonke ixesha le-2011-2012.
Kungekudala uSilva wafumana ukunyuselwa kwaye wenza ubuchule bakhe kwimpumelelo ye-2-1 yokuphumelela kwekhaya ngokuchasene ne-FC Penafiel. Nangona kunjalo, wayengakhululekanga ukuyidlalela iklabhu ecinga ukuba ingalibazisa.
Ifoto enqabileyo kaRafa Silva odlala iCD Feirense. Ityala lemifanekiso: I-Maisfutebol.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ukuphakama Kwigama leNdaba
Ngenxa yoko, uSilva akachithanga xesha ekukhuseleni indawo yokuya kwi-SC Braga apho izakhono zakhe zesilver zathathwa ziphezulu ngabaphathi abaphumeleleyo ababekhe bakhe iqela elijikeleze yena. Impumelelo yakhe ngeBraga ibandakanya ukukhokela iqela ukuya kuma-quarterfini e-2016 UEFA Europa League ngokunjalo noloyiso kwi-2016 Taca de Portugal Final.
Ngokukhawuleza phambili ukuza kuthi ga ngoku uSilva ngumdlali ophambili kwiqela elihlaselayo likaBenfica ongayeki ukuphumelela ukuthandwa ngabalandeli beklabhu kunye nabaphathi kunye nabachasayo. Ezinye, njengoko besitsho, yimbali.
URafa Silva ngomnye wabahlaseli ababalaseleyo ngexesha lokubhalwa. Ityala lemifanekiso: i-portugalinews.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubuhlobo boBomi boBomi
Emva kwayo yonke intiyo yebhola ekhatywayo yintombi exhasa imeko. Ukubambisa kubambelele ebomini bothando lukaRafa Silva kunye nenqwelomoya yakhe enqwenelekayo egama linguClaudia Duarte.
URafa Silva kunye nentombi yakhe uClaudia Duarte. Ityala lemifanekiso: CMjournal.
Nangona kuncinci okwaziwayo malunga nokudibana kwezithandana, ziye zajongwa njengezibini ezigqibeleleyo ezinothando lwasinda kuvavanyo lwexesha. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-duo ayikatshati ngexesha lokubhalwa, kwaye abanayo (unyana) kunye nendodakazi (intombi) ngaphandle komtshato.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Ubomi beNtsapho
Intsapho ayisiyonto ebalulekileyo kuRafa Silva, yinto yonke. Sichaza iinyani malunga nobomi bosapho bakhe.
Malunga noyise kaRafa Silva: UJoao Silva ngutata kaRafa. UJoao wayedla ngokuba ngumnkinki ongenakutshintshwa ukutshaya ade uSilva amenze ayeke ngokufumana amanqaku athile ngokweenjongo zokubheja ababevumelene ngazo bobabini. I-duo ihlala ikonwabela ulwalamano oluhle ngonyana kunye nokhonza njengempembelelo ezilungileyo komnye nomnye.
Malunga nonina kaRafa Silva: Akukho nto ingako yaziwayo malunga nomama kaSilva ngexesha lokubhala. Nangona kunjalo, ungomnye wabona bantu babalulekileyo entliziyweni kaSilva kwaye ngokubonakalayo ulilungu elithandekayo losapho lomhlaseli.
URafa Silva nabazali bakhe abaxhasayo. Ityala lemifanekiso: I-ZeroZero.
Malunga nabantakwabo bakaRafa Silva: USilva wakhula kunye nomzakwabo omdala owaziwa njengoJose Silva. Abantakwenu bajongeka ngeendlela ezininzi kwaye banokuba neempazamo zamawele. U-Asides Jose, akukabikho sikhankanyio sinokuqinisekiswa ngaso abanye abantwana.
URafa Silva kunye nomntakwabo uJose. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
Malunga nezihlobo zikaRafa Silva: Akukhange kubhalwe ngxelo ngootatomkhulu bakaSilva ngootatomkhulu noomama, oomalume bakhe, oomalume, abazala, abatshana kunye nabatshana abaziwa ngexesha lokubhala.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Iinkcukacha zobomi bomntu
Ngaba uyazi ukuba uSilva unobuntu obuphantsi emhlabeni ngelixa i-persona yakhe ikhanyisa iimpawu zophawu lweTaurus Zodiac? Ungumntu ohlekisayo, onobuhlakani, onobuntu, ozithobileyo kwaye ngokungaqhelekanga utyhila ulwazi malunga nobomi bakhe babucala kunye nabucala.
Umhlaseli uneqela elinomdla ekuzonwabiseni nasekuzonwabiseni okubandakanya ukufunda, ukubheja kwezemidlalo, ukufota, ukuqubha, umdlalo ohlekisayo, ukubukela, ukubukela imovie kunye nokuchitha ixesha elihle nabahlobo bakhe, usapho kunye nenja.
URafa Silva uchitha ixesha elinomgangatho kunye nenja yakhe. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Lifestyle Facts
Ixabiso lentengiso likaSilva le- € 28 yezigidi - ngexesha lokubhala-linika ulwazi kumvuzo wakhe wonyaka kwaye linikezela ngezixhobo zokuqikelela ixabiso lakhe elipheleleyo eliphantsi koqwalaselo ngexesha lokubhalwa.
Kwelinye icala, indlela yokuphila enobunewunewu kaSilva ingqina ngaphandle kwamathandabuzo avakalayo okuba wakhe isiseko semali esiqinisekileyo sokudlala ibhola, ngelixa indlela yakhe yokunxiba nokuzikhethela indawo yokuphumla imbonisa njengomchithi omkhulu, ngaphandle kwento yokuba indlu yakhe kunye nokuqokelelwa kweemoto okwangoku azaziwa.
Indlela yokugqoka kaRafa Silva kunye nokuzilungisa iyathetha ngobuninzi beepatheni zakhe. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
Iinyaniso zikaRafa Silva zobuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold - Inyaniso engekho
Wenza njani u-Rafa Silva ngaphaya koko kubhaliweyo ngaye kule bio? Nazi iinyani ezimbalwa ezingaziwayo okanye ezingachazwanga malunga nesidanga.
Ukutshaya nokusela: USilva akakuthandi ukutshaya kwaye wahamba iimayile esenza utata wakhe ayeke lo mkhwa. Nangona kunjalo, ayaziwa ukuba uyakuxabisa ukusela njengoko esabonwa ethatha imipu okanye esela ngokufanelekileyo kwiibar.
Iitattoos: Umhlaseli uthanda ii-tatoo kwaye unobugcisa bomzimba ngezandla zombini. Nangona kunjalo usezakudlulisela intsingiselo ngasemva kwabo, kwaye azange zithathwe ngabom ngenjongo yokuchaza izizathu emva kwe tattoos.
Imifanekiso yeRafa Silva's tattoos. Ityala lemifanekiso: I-Instagram.
Inkolo: Akukho nto ingako iyaziwayo malunga nenkolo kaRafa Silva ngeloxesha wabhala ngenxa yokuba engashiyanga manqaku kukholo. Ngaphezulu, i-Portuguese yamazwe aphesheya ayibabethi abalandeli kunye neendaba njengezenkolo ngexesha lodliwanondlebe.
Isizathu sokuba ligama likaSilva lesidlaliso: USilva wabizwa ngokuba "nguPhuthukezi Ingozi yeEdeni"Ngenxa yokuba amanqaku akhe kunye namathuba okudala amathuba ayafana naleyo yomdlali waseBelgian.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda iRafa Silva yethu yobuntwana Ibali leNqaku le-Untold Biography. Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
U-Ousmane Dembele Ibali leBantwana kunye neNgxelo engeyiyo
I-Memphis Deplay Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
UBarvin Pavard Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-27 kaSeptemba ngo-2019